Nohamafisina ny fepetra fisorohana ny Covid-19: Miato mandritra ny 30 andro ny sidina mampitohy an’i Eoropa | NewsMada
Nohamafisina ny fepetra fisorohana ny Covid-19: Miato mandritra ny 30 andro ny sidina mampitohy an’i Eoropa
Mitohy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Nanao fanambarana ho an’ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny filoha Rajoelina, ny asabotsy alina teo, hisorohana ny Coronavuris. Nivoitra tamin’izany ireo fepetra maromaro sy ny tsara ho fantatry ny rehetra.
Anisan’ny nambarany tamin’izany fa miato mandritra ny 30 andro ireo sidina rehetra mampitohy an’i Madagasikara sy i Eoropa. Anisan’izany i Frantsa, i Italia, i Alemaina, i Espaina… “Miato koa ireo sidina mampitohy an’i Madagasikara amin’i La Reunion sy i Mayottes. Mikatona avokoa ireo seranan-tsambo ho an’ireo sambo mpitondra mpizahatany “Bateaux de croisière”, hoy ny filoha. Nanteriny fa homena hatramin’ny alakamisy izao ireo vahiny sy ireo olona avy any ivelany mamita iraka eto Madagasikara hody sy hiverina an-tanindrazany na any ivelany. Eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato irery ihany sisa afaka mandray sidina avy any ivelany hanamorana ny fanaraha-maso. Tsy vitan’izany. “Arahi-maso akaiky ny fefehezana ny vidim-piainana hisorohana izay mety ho fanararaotana, misy fepetra hentitra horaisina amin’ireo minia manao izany”, hoy ihany izy.
Tsy mbola misy Coronavuris eto amintsika
Nialoha izany, nambarany fa tsy tratran’izany valanaretina izany ny eto amintsika. Zava- dehibe indrindra ny fahaizana mifehy sy misakana ny fidirany eto amintsika ary indrindra, ny fahafahana miatrika izany valanaretina izany. “Maro ireo fepetra noraisintsika satria sarobidy amiko loatra ny ain’ny Malagasy tsirairay avy. “Aleo misoroka toy izay mitsabo” ka notanterahintsika antsipiriany izany, mba hahafahana misoroka izany valanaretina izany”, hoy ny filoha. Manampy ireo ny fiantsoana ny telefaonina 910, maimaimpoana raha misy tranga mampiahiahy.
Notsiahivin’ny filoha fa hoatra ny gripa mahery, izany hoe, afaka mifindra amin’ny olona rehetra, amin’ny alalan’ny fifandraisan-tanana, ny Coronavuris. Nisy ny toromarika nomen’ny filoha. “Mila manasa tanana matetika isika rehetra. Farafaharatsiny aloha, tampenana ihany koa ny vava sy ny orona rehefa mievona na mikohaka. Mila diovina, ary indrindra raha misy ny fahafahana, diovina amin’ireo akora manokana, “désinfectants” ireo fitaovana rehetra mety ho noraisin’ny vahiny fa indrindra eny amin’ny toerana misy fandraisana olona: hotely, seranam-piaramanidina”, hoy izy.
Mielanelana iray metatra amin’ny olona ahina
Anisan’ny tokony hatao koa ny manalavitra tanteraka, farafahakeliny iray metatra, ny olona mety hahintsika na mitondra izany tsimokaretina izany. Tsy atao, ary tsy tokony hatao, ny fifanorohana rehefa mifampiarahaba. Tsy mifandray tanana ary tsy tsara ny mikosika ny maso na misokitra ny orona na manao tanana am-bava raha tsy voadio ny tanantsika.
Nanteriny fa miankina amin’ny fihanaky ny aretina ao anatina firenena iray ny fandraisana ny fepetra mifandraika amin’izany.
Miantso ny firaisankina sy ny firaisam-po ny filoha
Nambarany anefa fa raha sanatria, sanatrian’ ny vava aladian’ny lela, ka tafiditra eto amintsika izany valanaretina Coronavirus izany, efa miomana isika. “Horaisin’ny fanjakana manontolo ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ny marary voan’izany aretina izany. Tsy maintsy miatrika isika, ary tsy maintsy vonona amin’ny zavatra rehetra. Ilaina ny firaisankina, ilaina ny firaisam-po, ny firaisan-tsain’ny Malagasy iray manontolo amin’ny vanim-potoana tahaka izao hahafahantsika miatrika izao sedra lalovan’izao tontolo izao sy ny firenena malagasy ihany koa”, hoy ny filoha.